Kutsiva Canada's Fighter Jets neItsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kutsiva Canada's Fighter Jets neItsva
Nhasi, Hurumende yeCanada yakazivisa kuti zvichitevera kuongororwa kwezvikumbiro zvakatumirwa, 2 mabidhi anoramba akakodzera pasi peFuture Fighter Capability Project yemakwikwi ekutenga maitiro:
• Hurumende yeSweden—SAAB AB (publ)—Aeronautics with Diehl Defense GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd., uye RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., uye
• Hurumende yeUnited States—Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin Aeronautics Company) naPratt naWhitney.
Zvikumbiro zvakaongororwa zvakasimba pazvinhu zvekugona, mutengo uye mabhenefiti ehupfumi. Ongororo iyi yaisanganisirawo ongororo yehupfumi.
Mumavhiki anotevera, Canada ichapedzisa matanho anotevera ehurongwa uhu, izvo, zvichibva pakuwongororazve kwe2 asara mabhidhi, zvinogona kusanganisira kuenderera mberi nenhaurirano dzekupedzisira nemutengi wepamusoro-soro kana kupinda munhaurirano yemakwikwi, apo vaviri vakasara vasara. vaizopihwa mukana wekuvandudza zvikumbiro zvavo.
Hurumende yeCanada inoramba ichishanda kuti iwane mubairo wekondirakiti muna 2022, nekutumirwa kwendege kutanga kwa2025.
• Kutenga uku ndiko kudyara kwakakosha zvikuru muRCAF mumakore anopfuura makumi matatu uye kwakakosha mukuchengetedza kuchengetedzwa nekuchengetedzeka kwevanhu vekuCanada uye kuita zvinosungirwa kune dzimwe nyika.
• Hurumende yeCanada yakatanga nzira yakavhurika uye yakajeka yemakwikwi ekutora jets nyowani dzekurwira muna 2017.
• Vakuru vakaita kudyidzana kwakanyanya nevashambadziri, kusanganisira Canadian aerospace uye maindasitiri edziviriro, kuti vaone kuti vaive vakamisikidzwa kuti vatore chikamu mukutenga.
• Chikumbiro chepamutemo chezvikumbiro chakaburitswa kune vanokodzera vatengesi muna Chikunguru 2019. Yakavharwa muna Chikunguru 2020.
• Gwaro reCanada reIndustrial and Technological Benefits Policy, kusanganisira iyo Value Proposition, inoshanda pakutenga uku. Izvi zvinotarisirwa kuunza mabasa akakosha uye kukura kwehupfumi kuCanada aerospace uye mabhizinesi ekudzivirira kwemakumi emakore ari kuuya.
• Mutariri akazvimirira ega ari kuona hurongwa hwese kuti ive nechokwadi chekuti mabhidhiri akaenzana.
• Muongorori akazvimiririra webato rechitatu akabatanidzwa zvakare kuti aongorore kunaka uye kushanda kwemaitiro ekutenga.